1064nm 9W Multimode Fiber Pigtailed PIN နံပါတ် ၂ Laser Diode Modules ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > 1064nm 9W Multimode Fibre2PIN လေဆာရောင်ခြည် Diode Modules Pigtailed
1064nm 9W Multimode Fibre2PIN လေဆာရောင်ခြည် Diode Modules Pigtailed
1064nm 9W Multimode အမျှင်ဓာတ်နှစ်မျိုးဖြင့် PIN လေဆာရောင်ခြည် diode module များသည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောရောင်ခြည်အရည်အသွေးများရှိသည်။ အထူးပြုလုပ်ထားသော micro optics ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် laser diode chip မှအချိုးမညီသောဓါတ်ရောင်ခြည်မှ core fiber အချင်းနှင့်ထွက်သော fiber သို့အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် modules များကိုရရှိနိုင်သည်။ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်မီးရှို့ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် module တစ်ခုစီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်သက်တမ်းရှည်မှုကိုအာမခံသည်။
1064nm 9W Multimode အမျှင် ၁ ၏အကျဉ်းချုပ် PIN နံပါတ် ၂ လေဆာရောင်ခြည် diode module ၂ ခုကိုပြောင်လှောင်ထားသည်
1064nm 9W Multimode ဖိုင်ဘာ ၂။ နိဒါန်းသည် PIN ၂ ခုရှိလေဆာရောင်ခြည် diode moduleများကိုပြောင်လှောင်ထားသည်
1064nm 9W Multimode ဖိုင်ဘာ၏ထူးခြားချက်များ ၂ PIN ပင်မလေဆာရောင်ခြည် diode moduleများပြိုကျသည်
output ကိုပါဝါ c.w. ပေါ့ပ် (c.w. ):9Watts;
Pop တွင်လှိုင်းအလျားအများဆုံး: 1064 nm (+/- 10nm);
ရောင်စဉ်တန်းအကျယ် (FWHM):5nm;
စင်ပြိုင်ဂဟေ 2-Pin တံဆိပ်ခတ်အထုပ်;
ဗဟိုဗဟိုလှိုင်းအလျား 915nm / 940nm / 975nm / 1064nm ။
1064nm 9W Multimode fiber ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် PIN လေဆာရောင်ခြည် diode module ၂ ခုကိုပြိုကျစေပါတယ်
Solid State Pumping၊
1064nm 9W Multimode ဖိုင်ဘာ၏ 5. Electro-Optical Charactericals (T = 25âƒ)2PIN လေဆာရောင်ခြည် diode module တွေ pigtailed
operating output ကိုပါဝါ Pout -9- W
ရရှိနိုင်သည့်လှိုင်းအလျား၏အတိုင်းအတာ λ 1054 1064 1074 nm
ရောင်စဉ်တန်း width ကို FWHM @ Î” Î» - 3.5 7.0 nm
လက်ရှိ Threshold ဟုတ်တယ် - 0.5 0.9 A
Pout မှာလက်ရှိလည်ပတ် IOP - - 12.0 A
Pout တွင်လည်ပတ်နေသောဗို့အား VOP - 1.65 2.2 V
ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု - - 45 - %
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု η - 0.85 - W / A
ဖိုင်ဘာ core ကို / ဝတ်အချင်း DCOR 105/125 μm / μm
ဖိုင်ဘာကြားခံအချင်း DBUF - 250 - µm
အမျှင်အရှည် Lf 0.9 - - m
Connector အမျိုးအစား - null, FC / PC ကို, SMA905 -
6. Package ပုံဆွဲခြင်းနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1064nm 9W Multimode ဖိုင်ဘာ2PIN လေဆာရောင်ခြည် diode module တစ်ခုပြောင်လဲသွားသည်။
၇။ 1064nm 9W Multimode ဖိုင်ဘာကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်ခြင်း PIN နံပါတ် ၂ ခုရှိသည့်လေဆာရောင်ခြည် diode module တစ်ခု။
hot Tags:: 1064nm 9W Multimode Fiber Pigtailed PIN နံပါတ် ၂ လေဆာရောင်ခြည် Diode module တွေ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ ပေးသွင်းသူတွေ၊ လက်ကားရောင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊